कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझाव Global TV Nepal
कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझाव
ग्लोवल टि.भी. बुधबार, साउन ६, २०७८ 0
नेपालमा कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापन र तेस्रो लहरको तयारीका लागि भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।
क्षेत्रीय परिस्थितिले गर्दा केही महिनामा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै डा. महेश मास्के लगायत १६ जना जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै १८ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।
उच्च स्तरीय कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत हुनुपूर्व सबै महत्वपूर्ण विषयमा राय लिन योग्य चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरु सम्मिलित स्वतन्त्र सल्लाहकारहरुको समूह बनाउन सुझाव दिँदै उनीहरुले योग्यता र क्षमताको आधारमा तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेका छन् ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम स्वेदश फर्कियो
उपत्यकाका सीडीओहरूको बैठक बस्दै , निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च जाँदै विपक्षी गठबन्धन